लादेन मार्ने मिसनमा प्रयोग भएको कुकुर कसरी आइपुग्यो भारतीय प्रहरीको हातमा ? « Naya Page
लादेन मार्ने मिसनमा प्रयोग भएको कुकुर कसरी आइपुग्यो भारतीय प्रहरीको हातमा ?
प्रकाशित मिति : 15 April, 2019 2:35 pm
काठमाडौं, २ बैसाख । सन् २००१ मा अमेरिकाको ट्वीन टावर हमलासहित थुप्रै आतङ्कवादी गतिविधिको नेतृत्व गरेका अल कायदाका पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई मार्ने अमेरिकी नेवी सील टीममा सहभागी बेल्जियन मालिनोस प्रजातिको कुकुरलाई मध्यप्रदेश प्रहरीले डग स्क्वायडमा सहभागी गराइएको छ ।
मालिनोस जातिको कुकुरलाई अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउसको सुरक्षामा खटाइँदै आइएको छ । मध्यप्रदेश प्रहरीले २ बेल्जियन मलिनोसआफ्नो डग स्क्वायडमा समावेश गरेको छ । मध्यप्रदेश प्रहरीका एक अधिकारीले भने, ‘यस जातिको कुकुरको सूंघने र हमला गर्ने क्षमता अन्य प्रजातिको कुकुरमा भन्दा ज्यादा हुन्छ ।’
यी कुकुरलाई नौ महिना प्रशिक्षण दिइनेछ । जसको खर्च एक लाख भारतीय रुपैयाँ प्रति कुकुर हुनेछ । सो खर्चमा उनको लागि आहार र अन्य सुविधाहरु हुनेछन् । विश्वका कयौ प्रहरी बल पनि यस जातिको कुकुरको प्रयोग आफ्नो डग स्क्वायडमा गरिरहन्छन् ।
मध्यप्रदेशमा यसभन्दा पहिले यस जातिको कुकुर वन्यजीव संरक्षण र अवैध शिकार विरोधी अभियानको लागि गरिएको थियो । बेल्जियन मालिनोसको ऊंचाई २४ देखि २५ इन्च हुन्छ । यसको वजन १८ किलोग्रामदेखि २७ किलोग्रामसम्म हुनसक्छ । यसको औसत आयु १४ देखि १६ बर्ष हुन्छ । एजेन्सी
स्वास्थ्यका दुवै सचिव सरुवा ! थपलियालाई जिम्मेवारी !
अब सशस्त्रका पूर्व कर्मचारीलाई जीवन निर्वाह भत्ता, ऋणको कोटा पनि बढ्यो
लुक्ला दुर्घटना : सँगै उभिएका दुई साथीको ज्यान जाँदा दैवले यसरी जोगायो प्रनि देउमानलाई
एक्ली आमाले दुःखले पाइलट बनाएका सुजित विमानमै बिलाए
नयाँ वर्षकै दिन समिट एयरको विमान लुक्लामा दुर्घटना, पाइलटसहित चारको मृत्यु (तस्विरसहित)
विप्लव नेकपाका दुई केन्द्रीय सदस्यसहित तीन जना पक्राउ
रोल्पा, ७ बैसाख । सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाका दुई केन्द्रीय सदस्य पक्राउ परेका छन्
२३ जनाको ज्यान लिएको ‘राम्री मोड’ काट्न राप्ती राजमार्ग २५ गतेसम्म बन्द
दाङ, ७ बैसाख । आज (शनिबार) देखि राप्ती राजमार्ग वैशाख २५ गतेसम्म दिनभरजसो बन्द गरिने
दुलहीलाई दाइजोमा विषालु सर्प !
काठमाडौं, ७ बैसाख । विवाहमा दाइजोको रुपमा रुपैयाँ, पैसा, गाडी दिनु आम चलन हो ।